July 25, 2021 N88LeaveaComment on निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्मला पन्तको हत्याका सम्बन्धमा शीघ्र दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले शीघ्र दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । निर्मला हत्या प्रकरणको आज तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले चासोपूर्वक […]
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका उमेश श्रेष्ठकाे किन विवाद र आलाेचना भइरहेकाे छ ?
July 25, 2021 N88LeaveaComment on स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका उमेश श्रेष्ठकाे किन विवाद र आलाेचना भइरहेकाे छ ?
कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका वेला सक्षम स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग चौतर्फी भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वार्थ बाझिने गरी जनमैत्री अस्पतालका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। लिटिल एन्जल्स स्कूलका सञ्चालक श्रेष्ठका होटल, जलविद्युत्, कृषि फार्म आदि क्षेत्रमा लगानी छ। पछिल्लो समय उनले अस्पतालमा लगानी बढाएका छन्। उनीसहितको समूहले जनमैत्री […]
यी हुन् काठमाडौंमा आनाको १० लाखभन्दा कम मूल्यमा घडेरी पाइने १२ ठाउँ
July 25, 2021 August 2, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् काठमाडौंमा आनाको १० लाखभन्दा कम मूल्यमा घडेरी पाइने १२ ठाउँ
काठमाडौं उपत्यकामा घडेरीको मूल्य अचाक्ली बढेर मध्यम वर्गको घर सपना धेरै टाढा पुगिसकेको छ । एउटा सामान्य जागिरे व्यक्तिले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाउन नसक्ने स्थिती छ । रिङरोडबाट ८–१० किलोमिटर बाहिर पुग्दा पनि टुक्रा जग्गाको आनाकै २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । रिङरोड र ठूलो सडकको आसपासतिर जग्गाको मूल्य उछालिएर चुलीमै पुगिसकेको छ । […]
July 25, 2021 N88LeaveaComment on निर्मलाका ह-त्या-रालाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्मला पन्त ह -त्याका दाेषी पत्ता लगाइ का-र-बाही गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापालाई बोलाएर निर्मलाका ह-त्या-रा पत्ता लगाइ का-र-बा-ही गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्मलाको ह-त्या भएको तीन वर्ष पुगेको दिन आइतबार गृहमन्त्री खाँण र […]
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाकोअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद्हरुबीच ब्युँतिएको संसद्को विषयमा नोकझोक भएको छ। सोही क्रममा एमाले सांसद् नारदमुनी रानालाई एमाले वरिष्ठ नेता तथा सांसद् माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर जान भनेका थिए। बैठकको सुरुवातमा सांसद्हरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफूहरुको भेट भएको भन्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसैक्रममा बोलेका एमाले (अध्यक्ष केपी शर्मा […]
July 25, 2021 N88LeaveaComment on संसदीय समितिमा सबै सांसद समान हुन्, मलाई बाहिर भनेर निर्देशन दिने माधव नेपालको हैसियत के हो ? : सांसद राना
काठमाडौ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिको बैठकमा आफू माथी अर्का सांसद माधब कुमार नेपालले गर्नु भएको व्यबहारको अडियो रेकर्ड माग गर्दा सांसद नारादमुनी रानाले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराउनु भएको छ संसद सचिवालयका महासचिव महासचिवलाई पत्र लेख्दै रानाले बैठकको श्रव्यदृष्य सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको हो । रानाको पत्रमा महाससचिबले तोक लगाएपनि बिभिन्न बहानामा श्रव्यदृष्य […]
प्रचण्डलाई बुहारी बिनालाई मन्त्री नबनाउन माओवादी सांसद्हरुको चेतावनी
July 25, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डलाई बुहारी बिनालाई मन्त्री नबनाउन माओवादी सांसद्हरुको चेतावनी
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाएर विद्रोह हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । माओवादी सांसद्हरुको एक समूहले बिना मगरलाई मन्त्री नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरी कृष्णबहादुर महरालाई पनि मन्त्री बनाइए ठिक नहुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । सांसद्हरु हरिबोल गजुरेल, अमनलाल मोदी, इन्दुकुमारी शर्मा, धर्मशिला चापागाईं लगायतले […]
July 25, 2021 N88LeaveaComment on देउवाले पारा देखाउन थालेपछि प्रचण्ड माधव तनावमा, ‘खल्ती’का मान्छेलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री !
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जुनै जोगी आएनी कानै चिरिएका’ । त्यही उखानलाई चरितार्थ गर्छन्, नेपाली नेताहरु । सत्तामा चाहे जुनै पुगोस्, पारा उही । ढिपी आफ्नै । कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भएर पनि हदैसम्म गिरेर ‘नाक काटे’ भनेर भरखरै खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बहिर्गमन भयो । ओली असफल भएपछि दलीय–निर्दलीय गठबन्धनले पहिले चार पल्ट सत्ताको स्वाद […]
July 25, 2021 N88LeaveaComment on वैदेशिक रोजगारीले खुसी लुट्यो, दिदीभाई मिलेर बाबुको काजकिरिया गर्दै
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिका –६ की अनिता गौतम छोरा सरह बुबाको किरियाकर्म गरिरहेकी छन् । बुबा हरिप्रसाद गौतमको निधन भएपछि अनिता भाइसँगै बुबाको काजकिरिया गरिरहेकी हुन् । अनिताले भाइजस्तै कपाल खौरिएकी छैनन् । तर, सेतो कपडा लगाएर कोरा बसेकी छन् । छोराले झैँ उनले १३ दिन सम्पूर्ण कर्म गर्नेछिन् । यसअघि प्रायः छोराले नै बाबुआमाको […]
माधवको हातमा ८ मन्त्रालयसहित राजदूतमा बराबरी भाग
July 25, 2021 N88LeaveaComment on माधवको हातमा ८ मन्त्रालयसहित राजदूतमा बराबरी भाग
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा जाने निश्चित भएपछि मन्त्री र अन्य नियुक्तिमा छलफल सुरु भएको छ । हिजो बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपालले सम्मानजनक अवस्था आएमा आफू सरकारमा जाने बताउनुभएको थियो । सम्मानजनक भन्नाले आठ जना मन्त्री आफूलाई मिलाइदिन शनिवार बिहान प्रचण्डसँग आग्रह गर्नुभएको नेपाल निकट एक स्रोतले बताएको छ । ‘माधव नेपालले […]